amiprince, Author at Kavyalaya - काव्यालय
by amiprince अशोज २५, २०७६
written by amiprince
मेरी सकम्बरी आँखाभरि आँसु लिएर गुनासो गरिरहेकी छ । उसलाई आधुनिकतासँग गुनासो छ । भन्छे, ‘म सिसाको बन्द बाकसमा सास फेर्न सक्दिनँ ।’
शरदमा पारिजात फुल्छन कि फुल्दैनन्? मलाई थाहा छैन । तर, पारिजात बहुतै सुन्दर लाग्छ । पारिजात फुलेको साँझ म हिड्ने बाटो सुगन्धित भईदिन्छ । तपाईं हिड्ने बाटोमा पारिजात फुल्दा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन ?
सकम्बरीसँग मेरो भेट पहिल्यै भएको थियो । सायद, कक्षा ८ मा थिएँ म । उ शिरमा शिरिषका फुलहरु उनेर उभिएकी हुन्थि । आँखा धेरै भारी थियो सायद, केही खसालिरहेकी हुन्थि । तर, जब आउँथे म सामुन्ने आँखु पुछेर चुपचाप बस्थी र मुस्कुराउँदै भन्थि, ‘मलाई गाउँले जीवन नै बेस लाग्छ ।’
आज सकम्बरीको गुनासो अन्य दिनको भन्दा फरक भईरहेको छ । उ आँखाभरिका आँसुलाई खसालिरहेकी छैन । मात्र के के फलाकिरहेकी छे । गुनासो गरिरहेकी छे । म उसको ध्यान अन्तै लैजान खोजिरहेको छु । सोध्छु, ‘सकम्बरी, कति भयो नि तिम्रो उमेर ?’
उ उमेर सोधेपछि झनै धोत्लिन्छे । मान्छे किन धोत्लिने गर्छ? म जान्दिनँ । तर, यत्ति त हो, अहिले मान्छे मोबाईल हेर्नलाई भने अवश्य धोत्लिन्छ । सकम्बरी किन धोत्लिई म जान्दिनँ ।
‘जन्मिएको मान्छेको उमेर हुन्छ, मेरो उमेर छैन’, उ अनायासै रिसाउँछे । उसको रिश पनि हिउँ जस्तै लाग्छ । एकछिन खेल्दा कस्तो रमाईलो, धेरै खेल्दा पोल्ने । उ कति बेरको लागि रिसाउने सोचेकी हो? उसले भनेकी छैन ।
उसले मलाई अस्पतालसम्म जाउ भनेर ल्याएकी छे । आउनु अघि मात्रै त हो, उसले मलाई घाटमा ध्यान गर्न लगाएकी । मान्छे ध्यान किन गर्छ? म जान्दिनँ । उसले ध्यान गर्न लगाउँदा मैले ध्यान त गरें । तर, त्यो ध्यान भयो कि भएन, मलाई थाहा छैन । ध्यान उसले गरेकोलाई भन्छ कि भन्दैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन ।
अस्पतालमा सायद कसैलाई भेट्न आएकी हो ऊ । म किन आएँ ? त्यो म जान्दिनँ । तर, अस्पताल आउँने बाहाना मै मलाई उसले धेरै कुरा बताएकी छे ।
उ आउँदा ट्याक्सीमा जान मानेकी थिईन । होईन, ट्याक्सी उसको कुरामा मानेको थिएन । उसले ट्याक्सीले यात्राको मोल फरक फरक राखेका थिए । यहाँ मोल हरेक कुराको राखिन्छ ।
हिड्दा हिड्दै सकम्बरी मसँग संवादमा भुल्छे । म उसले बोलेका शब्दमा भुल्छु ।
एकलब्य, यो शहरमा हरेक कुराको मोल हुन्छ । यहाँ आँसु बिक्छ, अस्मिता बिक्छ । ईश्वर पनि बिक्छ, भोक पनि बिक्छ । मैले यहाँका कुना कन्दराहरु चहारेको छु, मैले यहाँको हाट बजारको मुटु छामेको छु, स्पन्दन महसुस गरेको छु । कहिलेकाँही मलाई लाग्छ, बिद्रोह गरिदिउँ यो चलनसँग । गर्न पनि चाहेकै थिए । तर, केश काटेर मात्रै बिद्रोह हुँदैन । हातमा चुरोट च्यापेर मात्रै बिद्रोह हुँदैन । म जुन बेला रचिए, त्यो समय यस्तो थिएन जस्तो अहिले छ । मलाई क्लियोपाट्राजस्तो हुनु थियो । बलमानभन्दा पनि बलमान सोच भएको कसैलाई आफ्नो अधिनमा राख्न सक्ने । तर, विलय चाहिएको थिएन उसको जस्तो । म पितृसत्तात्मक सोचको जरा फैलिएको भूमिमा जसोतसो टुसाएको एउटा निलो फूल मात्रै थिए । बस, एउटा निलो फूल । तर, म हुर्किनु पर्दा पनि निकै संघर्ष थियो । म आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्न निकै लडेकी थिए, चुलो र चौकोसँग । भलै, मेरो जीवनको क्षेत्रफलमा ती कुराहरुको धेरै महत्वपूर्ण आयतन थिएन । तर, मैले देख्दा मेरी छिमेकी ‘सुम्निमा’ त्यो बाट टाढा थिईन । उ त्यो भएर बाँचिरहेकी थिई, जुन बास्तवमा उ थिईन ।
अस्पताल आएपछि सकम्बरी चुपचाप भएकी थिई । उसको गला अवरुद्ध भएको थियो वा थिएन, म जान्दिनँ । तर, त्यत्ति बेलै हो, उसको आँखाबाट दुई थोपा आँसु खसेको ।
अस्पतालमा केही मात्रामा भिड थियो, अन्य दिनमा हुने भन्दा । हामी अगाडि बढ्दै गयौं । त्यहाँको भीड छिचोल्न हम्मेहम्मे थियो । सकम्बरीलाई कसैले पछाडिबाट बोलायो, ‘भाई, यहाँबाट चोभार जाने कता हो बाटो ?’
उ चुपचाप थिई, चुपचाप नै रहि । उसको केश थियो, कपाल थिएन झरि अघिको बादलजस्तो धनधोर । उ पछाडि फकिई । सोध्ने मान्छे केही हिचकिचायो । छातीको चुचुरो देखेर होला सकम्बरीको, उसले थाहा पायो सकम्बरी भाई थिईन । उसले जवाफमा बताईदिई चोभार जाने बाटो । हामी अघि बढ्न थाल्यौं । अलि अगाडि त्यहिँ व्यक्ति थियो, सकम्बरीलाई भाई बोलाउने । उसँग अर्को कोही पनि थियो । उसको निधारमा पूर्ण देखिने गरि केही लेखिएको मैले देखें । सकम्बरीले देखि कि देखिन? म जान्दिनँ । त्यहाँ लेखिएको थियो, परम्परावादी ।
उनीहरु संवाद गरिरहेका थिए ।
– अघि बाटो सोधेको केटा थियो कि केटी ?
– खै, मैले त टाउको हेरेर बोलाए । आवाज सुन्दा त केटीको जस्तै थियो ।
– हुन् त छाती पनि निकै उँचो थियो ।
– सायद, छक्का पो हो की?
– होला । अहिले त त्यस्तोको पनि खुब बिगबिगी छ ।
सकम्बरीले उनीहरुको संवाद सुनिरहेकी थिई । उ आक्रोशित भई । मैले उसलाई अस्पतालको माथिल्लो तलामा लिएर जाने प्रयास गरें । उनीहरुले गरेको संवादले उसको अनुहार रातो भएको थियो । लज्जाले होईन, आक्रोशले । भर्याङ्ग चढ्दै गर्दा मलाई सोधि– मान्छेले आवरणको हेरेर कसरी लैङ्गिकताको बर्णन गर्न सक्छ ? उसको प्रश्नमा मैले जवाफ दिईन । मसँग जवाफ थियो पनि र थिएन पनि । यदि मैले त्यो जवाफ दिएको भए, अर्को प्रश्न उब्जिन्थ्यो । प्रश्नहरु किन उब्जिन्छन्? तपाईंलाई पनि थाहा होला ।
अस्पतालको माथिल्लो तलामा पोर्टमार्टम गर्ने ठाउँ थियो । बाहिर रातो सारीमा एक महिला सेतो अनुहार बनाएर बसिरहेकी थिईन । सकम्बरी उसको छेउमा गई । सोधी– किन यहाँ भिड भएको ?
ती महिला एक टकले हामीलाई हेर्न थालिन । उसको आवाज सुनिएको थिएन । बाहिरबाट कसैले हल्ला गरेको थियो कि? वा कुनै आन्दोलन ? हल्ला सुन्दा आन्दोलन जस्तै लाग्थ्यो । दोस्रो पटक पनि सकम्बरीले प्रश्न दोहोर्याई । किन ? त्यो उसलाई नै थाहा थियो । म हुन्थे त, पहिलो पटकको प्रश्नमा कसैको प्रतिक्रिया नपाएपछि जवाफ खोज्दै अर्को पटक प्रश्न राख्दिनँ थिएँ, कसैको गर्धनमा । प्रश्नहरु पनि त भयानक भईदिन्छन् । कहिलेकाँही त निल्न नसक्दा मस्तिष्कमा वर्षौसम्म अडकिरहन्छन् । जवाफ पर्खिरहन्छन् ।
ती महिलाले मौनताको चुकुल्ल खोलिनँ–
“नानी, डाक्टरहरुको आन्दोलन छ । मेरी छोरी भित्र मृत्युसँग लडिरहेकी छे । महिना नपुग्दै जन्मिएको उसको बच्चा हिजै मरिसक्यो ।”
सकम्बरी फेरि मौन भई । किन भई? तपाईंलाई पनि थाहा होला ।
उ भन्छे– “संवेदनाले बहुतै छुन्छ ।”
हामी अस्पतालबाट निस्किएर रत्नपार्क छेवैमा बसेका थियौं । मस्जिद बाहिर उभिएका हामी हिन्दु भएकै कारण खेदाईयौं वा अरु केही थियो कारण । तर, त्यहाँ उभिएको केही क्षणमा नै हामीलाई त्यहाँबाट खेदाईयो । किन खेदाईयो? त्यसको कारण के थियो ? म जान्दिनँ । सकम्बरीलाई थाहा होला? मैले सोधेको छैन ।
रत्नपार्क छेवैमा उभिएका हामीलाई आकाशे पुलमा जाने सोच बनाएका थियौं । मेरो अगाडि हिँडि ऊ । म पछिपछि थिए । माथि पुग्दा उ अघि भन्दा झन उदास भएकी थिई । के भयो? मैले ढिलो आएको कारण थाहा पाईन ।
साँझमा रंग थपिदैं थियो । अँध्यारो बढ्दै थियो । उ पुलमाथि आईपुगेको केही सेकेण्ड पछि नै त हो, म पनि त्यहाँ आईपुगेको । तर, उसलाई के कुराले उदास बनाएको थियो? थाहा पाउँन सकिन । उ मेरो हात समाएर तल ओलिन्छे । हामी बागबजारका गल्लीमा हिड्छौं ।
भित्री गल्ली । जस्तो हुन्छ मान्छेको भित्री मन । भित्री गल्लीका धेरै कुराहरु हुन्छन् । मान्छेको मनमा के के हुन्छ? तपाईं छामेर हेर्नुस त आफ्नो मन ।
गल्लीमा हिड्दा उ बोल्छे–
“एकलब्य, तिमी पुल आउँन अलि पाईला अबेर गर्यौ । म हिडिरहँदा कसैले मेरो पछाडिबाट हात हाल्यो र सोध्यो, ‘ जाने हो? कति हो नि तिम्रो रेट’ म त केही बोल्नै सकिनँ ।”
म चुप बस्छु । मैले बुझेको छु, यस्तो किन भईरहेको छ । तर, मसँग तार्किक जवाफ छैन । उ जवाफ तर्कमा खोज्छे ।
अहो! मैले त यादै नगरेको कुरा । सकम्बरीको अनुहारमा सुयोगविरले एसिड छ्यापिदिएको रहेछ । उसको अनुहारबाट उसको ‘अनुहार’को हंस समेत देखिएको थिएन । हातहरु पनि जलेका रहेछन् । अघिल्लो भेटमा उसले भनेकी थिई, विवाह हुनै लागेको कुरा । पक्कै दाईजो भने जति ल्याउन नपाएको कारण होला उसलाई जलाउने प्रयास पनि गरिएको रहेछ ।
बल्लबल्ल उसको शरिरमा लागेको चोट केही खुलेको थियो । थोरै भएपनि हेर्न लायक भएकी थिई सकम्बरी । उसलाई गुनासो थियो धेरै पहिलोबाट काठमाडौंसँग । भनिरहन्थी– ‘बल्लबल्ल उम्किएकी म, यो शहरको धुँवाधुलोबाट भाग्न सकिनँ । मन छ भाग्न कतै टाढा ।’
उसलाई तराईं जाने खुबै रहर पनि थियो । एकदिन ख्यालठट्टाकै क्रममा हो सायद भनेकी थिई– मलाई तराईंको गर्मिमा पग्लिनँ मन छ । त्यो बेला सुयोगविरसँग उ एकरत्ति मिल्दिनँ थिई ।
सावन कै महिना थियो, काठमाडौंबाट हामी पश्चिमतिर लागेका थियौं । गर्मि अत्याधिक । कता जाने के गर्ने थिएन कुनै टुंगो । चुपचाप चुपचाप हाम्रो पैदलयात्राले गाडिको दिवारसम्म पछ्याएको थियो । उ त तंग्रिएकी थिई केही । चोटहरु निको भएकै कारण होला, अलिअलि भएको खाटो घाउँले पनि उसलाई कुरुप बनाएको थिएन । कलंकीबाट चलेको गाडि कुन बेला पुगेको थियो कञ्चनपुर थाहै भएन ।
लामो गाडिको यात्राले थकित भएको थियो ज्यान । के गर्ने कसो गर्ने? केही थाहा नभएकै हो । त्यसपछि नै त हो, होटलमा भएर रुम छ भनी सोधेको । पाएपछि दुईवटा कोठा खालि, म आराम गर्न थाल्दा त हो, उ बाहिर निस्किएर साथिकोमा जान्छु भनेर निस्किएको । भनेकी थिई– नजिकै छे साथि । उसैकोमा पुगेर आउँछु ।
साँझ फर्किईन सकम्बरी । कुर्दा कुर्दै उसलाई अँध्यारोले ढाकिदियो पुरै कञ्चनपुरलाई । साँझ होटलमा भनेपछि खोज्न पनि निस्किएकै हो । तर, कतैपनि उसलाई भेटिएन । प्रहरीकोमा जाँदा सुनियो– राती राती के को मान्छे खोज्न जानु? हाम्रो ड्युटीको समय सकियो ।
जानभर छटपटिमा निदाउँने कुरा नै भएन । बिहान पख भमक्कै निद्राले च्यापेछ । कुर्सिमा बसिरहँदा नै निदाएको रहेछु । हातमा भएको चुरोट कति बेला जलेर औंला पोलेर सकियो, त्यो चुरोटलाई नै थाहा होला । चुरोटले आफू जल्नुको अभिलेख राख्छ राख्दैन? मलाई थाहा छैन । बिहान निद्रा झस्कियो । होटल मालिकले आएर झस्काएर उठाए । रातभर उसलाई खोज्दा नभेटेपछि उनीहरु पनि थिए नै चिन्तित ।
होटल मालिक अँध्यारो थिए । सुर्योदय भर्खर नै भएको थियो । तर, उनको अनुहारमा सुर्यास्त भएको प्रष्ट थियो । उनी बोल्न थाले– तल भीमदत्त नगरपालीकामा एउटा शव भेटिएको छ रे । गाउँलेले खबर ल्याएका छन् ।
म झसंग मात्र भईन । के के भएँ, त्यो म भन्न सक्दिनँ । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, त्यो सकम्बरी नै थिई । उसको शरिरमा कुनै कपडा थिएन । नाङ्गो थियो शरिर । उखुबारीमा पल्टिएको ।
प्रहरी आयो । मुचुल्का उठायो । आफन्त खोज्दा म नै गएँ । उनीहरुले पोर्टमार्टम गरेर परिवारलाई बोलाउँन भनें । मसँग उसको परिवारको सम्पर्क थिएन । होस पनि कसरी? उसले कहिल्यै बताएकी थिईन ।
पोर्टमार्टमको रिपोर्टले अर्को पटक झस्काईदियो । उसको बलत्कार भएको रहेछ । सामुहिक बलत्कार । उसको शवलाई रातरात जलाईयो । प्रहरीको जवरजस्तीमा । त्यस्तो किन भयो? म जान्दिनँ ।
काठमाडौं फर्किपछि पनि म झकिरहें । कैयौं महिनासम्म सकम्बरीको लागि न्याय माग्दै धर्ना बसिए । आन्दोलन भएँ । तर, न्याय ? त्यो के थियो? के हुन्छ न्याय? मैले थाहा पाईन ।
सकम्बरीको परिचय खोज्दै जाँदा थाहा भयो, उ पारिजातकी सन्तान थिई । पारिजात अर्थात विष्णुकुमारी वाईवा । मसँग भेटेपछि उनी निकै रोएकी थिईन । उमेर पाको भएछ क्यार । बिस्तारै बोल्थिन । आँखामा लगाएको चस्माको सिसा निकै मोटो थियो । पावर ज्यादा भएर होला । उनले भनेकी थिईन– “मैले सबैभन्दा माया गर्ने सन्तान थिई सकम्बरी । सधैं दुःख मात्रै पाई । मैले सुयोगविरसँग प्रेम हुनुभन्दा अगाडि देखि नै उसलाई वास्ता गरेकी थिईन । छोडिदिएकी थिएँ स्वतन्त्र । तराई गएकी थिई । पछि सुयोगविरसँग विवाह भएछ । दाईले विवाह गर्दा भनेको जस्तो दाईजो दिन नसक्दा जलिछ । अहिले झन यस्तो भयो ।”
उनी रोईरहिनँ । पारिजात रोईरहिन ।
आजभोली सकम्बरीलाई धेरैले चिनेका छन् । उसको तस्विरसँग ‘सरकार भेटियो, न्याय हरायो’ लेखिएको पोस्टर धेरै ठाउँमा टाँसिएको छ । कैयौं सामाजिक अभियन्ता पनि जन्मिएका छन् उसको लागि लडेको भन्दै । तर, उसले अझैं न्यायको अनुहार देख्न पाएकी छैन । सपनामा आएर बेलाबेला मलाई सोधिरहन्छे– ‘एकलब्य, यो न्याय कस्तो हुन्छ?’ सपनामा आउँदा उसको अनुहार झन एसिडले जलेको हुन्छ । शरिर पनि झन पोलिएको हुन्छ । अर्को पिडा, उ समाजबाट बलत्कार भएकी भनेर तिरस्कार खेपिरहेको अनुहारमा प्रष्ट देखिन्छ । उ पटकपटक एउटै प्रश्न दोहोर्याउँछे सपनामा आएर– ‘एकलब्य, यो न्याय कस्तो हुन्छ?’ मलाई न्यायको अनुहार थाहा छैन र थाहा छैन, सपनाको समाजमा कसरी तिरस्कार हुन्छ म जान्दिनँ ।
पारिजात बहुलाई जस्तै भएकी भेटिन्छे । अस्ति भर्खरै मञ्जुलले भनेका थिए, उ सिहंदरबार अगाडि छाती पिटी पिटी रोईरहेकी थिईन । हिजो मात्रै, लामिछाने शंकरले रेडियो अन्तर्वातामा पारिजातले गरेको गुनासोलाई पोखेका थिए । आज पनि सिंहदरवार अगाडिबाट हिडिरहँदा उसलाई गेटैमा रोईरहेको भेटेको थिए । छाती पिटी पिटी भन्दै थिईन पारिजात– “कि मलाई न्याय देऊ कि छातीमा गोली हानेर मारिदेउ ।”
अशोज २५, २०७६0comment
कवितासँग डराउने शासक
by amiprince बैशाख २, २०७६
सानो गल्लीमा हिडिरहँदा एक कवि आए केही बर्दिधारीहरु मानेर शासकको आज्ञा खोजि गरें सबैतिर भेटिएन केही पनि बन्दुक जस्तो बारुद जस्तो सम्बोधन गर्दै भनिरहे– खोज यो आतंककारीको खल्तीमा होला कुनै…